New Djibouti Sheraton na Kempinski na Atlantic na -asọ mpi dị ka ụlọ nkwari akụ kacha elu
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ kacha ọhụrụ na Djibouti » New Djibouti Sheraton na Kempinski na Atlantic na -asọ mpi dị ka ụlọ nkwari akụ kacha elu
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ kacha ọhụrụ na Djibouti • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • investments • Iwughachi • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ndị ọbịa na Djibouti nwere ike tụgharịa njem nke ụzọ kacha ochie na azụ ahịa nnu ka ha na -aga n'akụkụ kamel ndị ejiri “ọla edo ọcha” buru, wee mikpuo na Whale Sharks, otu n'ime ụwa ebe mmadụ nwere ike ịbịaru nso na ihe okike ndị a. . Ndị ọbịa nwere ike ịga leta Lac Assal na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, naanị nkeji iri atọ site na Sheraton Djibouti, ọdọ mmiri na -acha akwụkwọ ndụ na -adọta ndị ọkà mmụta ala na ndị na -ahụ maka mgbawa ugwu si n'akụkụ ụwa niile.
Kempinski, Atlantic na ugbu a Sheraton Djibouti na -asọ mpi maka ndị ọbịa n'egwuregwu ahụ Oke osimiri Djibouti.
Taa Sheraton kwupụtara ebe ahụ ka ọ na-emepe mgbe itinye ego otu nde dollar nke ụlọ nkwari akụ nke nwere ọnụ ụlọ 185 dị ka ụlọ nkwari akụ mbụ na Africa n'okpuru akara Marriott a.
Oghere ndị a tụgharịrị echegharị bụ ebumnuche imepụta gburugburu ebe ndị ọbịa ga -enwe ahụ iru ala na ahụ iru ala, ma ha na -arụ ọrụ, na -ezukọ ma ọ bụ na -atụrụ ndụ.
N'ịdabere na mgbọrọgwụ ya dị ka ogige obodo maka ndị obodo na ndị ọbịa na ebe ọkọlọtọ n'ụwa niile, ụzọ ọhụrụ maka Sheraton na -emepụta ahụmịhe na nghọta zuru oke na ebe ị ga -ejikọ, na -arụpụta ihe, ma nwee mmetụta nke ihe.
Ụlọ nkwari akụ ahụ dị na Plateau du Serpent na Quloter Diplomatic ochie, ụlọ nkwari akụ ahụ dị anya site na etiti obodo Djibouti. na nkeji iri site na ọdụ ụgbọ elu mba Ambouli nke Djibouti. Ọmarịcha Sheraton Djibouti bụ ụlọ nkwari akụ mba ụwa mbụ mepere n'isi obodo, na -ejikọ ọdịbendị Djibouti bara ụba na ụkpụrụ ile ọbịa zuru ụwa ọnụ. Republic of Djibouti matara ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ ahụ n'afọ mbụ ya nke mepere emepe ma gosipụta ya na stampụ ozi nzipu ozi kwa afọ. Akara dị n'ime obodo, Sheraton Djibouti na -enwe ncheta pụrụ iche maka ọtụtụ ndị Djibouti na -enwe ọmarịcha nleta, nnọkọ ezinụlọ, na mmemme omenala na nkwari akụ.
ỤBỌCHỊ ỌZỌ “SQUARE PUBLIC”
N'etiti Sheraton Djibouti bụ ebe a na -anabata ndị ọbịa na -anya ọmarịcha ọkụ kristal na -egosi maapụ Djibouti. E megharịrị ọnụ ụlọ ebe a na -anabata ndị ọbịa dị ka "Ọha Ọha" nke ụlọ nkwari akụ ahụ; oghere zuru oke, nke na -akpọ ndị mmadụ ka ha nọrọ ọnụ ma ọ bụ wepụta oge ịnọ naanị n'etiti ndị ọzọ, na -ekepụta mmetụta nke ike na ịbụ onye. Site na mmụba nke eke, kensinammuo, na enweghị mgbagwoju anya, ndị ọbịa nwere ihe ha chọrọ n'aka aka ha, ha niile na -emegide ọnọdụ mara mma nke na -enwe mmetụta dị ọkụ na ntụsara ahụ mana nụchara anụcha.
Sheraton Djibouti nwere ọtụtụ ihe mbinye aka nke ọhụụ ọhụrụ nke Sheraton. Nke a gụnyere Isiokwu Obodo, oghere ọrụ na-adọrọ mmasị, nke nwere nzube nke na-ejikọ ọnụ ụlọ nkwari akụ ahụ ma nye ndị ọbịa ohere ịrụ ọrụ, rie ihe, na ị drinkụ mmanya mgbe ha na-amịkọrọ ume nke oghere. N'ịgbaso nkà ihe ọmụma Sheraton ịnabata ma ụdị na ọrụ, tebụl ndị a bụ omenala haziri iji mee ka ndị ọbịa na-emepụta ihe, gụnyere ọkụ ọkụ na ebe a na-ere ọkụ.
Ụlọ nka bụ ebe mgbakọ na -agbanwe agbanwe dị maka ịde akwụkwọ oge ọ bụla onye ọbịa chọrọ ya, na -eme ka ọrụ imekọ ihe ọnụ na -arụkọ ọrụ, na -ejikọ ma na -emekọ ihe na obere ọnọdụ. Ewubere na nyiwe dị elu ma jiri iko kpuchie ya, Studios nke teknụzụ na-enye ohere ka ndị ọbịa nye aka na ume nke oghere ọha ma na-enyekwa nzuzo na ilekwasị anya maka nzukọ obere ma ọ bụ ahụmịhe iri nri.
Onyinye nri na ihe ọ beụ beụ dị elu nke Sheraton Djibouti na -emepụta ebe lekwasịrị anya na ahụmịhe n'ọnụ ụlọ. Ogwe akụkụ, ụlọ kọfị akụkụ na ahịa akụkụ, Kọfị Ogwe bụ ogidi etiti ọhụụ ọhụụ Sheraton, na -ebugharị ndị ọbịa n'enweghị nsogbu site n'ehihie ruo abalị nwere nhọrọ iri nri nke dị na mpaghara, dị mfe iri mgbe ị na -arụ ọrụ yana ịhazi ya iji nabata ụtọ na nhazi oge niile.
Ndị ọbịa & klọb na -anọ n'ụlọ na -emepụta ihe
N'ụlọ ndị ọbịa, nke a na-emezigharị nke ọma, a na-anabata ndị ọbịa n'ime oghere na-enwu enwu nke nwere ọmarịcha ebe obibi. A na -ejikọ ụda dị nro na ụda ọkụ ọkụ na -acha anụnụ anụnụ na turquoise nke sitere n'oké osimiri Djibouti, ebe ejiri ihe osise sitere n'ike mmụọ nsọ chọọ ụlọ ahụ mma. Ejichaala ụlọ ndị ọbịa sara mbara na nke ọgbara ọhụrụ jiri ngwaọrụ ọhụrụ maka imepụta ihe, dị ka chaja USB na ogwe mgbasa ozi. Ndị ọbịa nwere ike ịnụ ụtọ ntụsara ahụ niile a tụrụ anya ya site na ọnụnọ Sheraton gụnyere akwa akwa ikpo okwu Sheraton Sleep Experience na ịsa mmiri ọgbara ọhụrụ.
Sheraton Club Lounge gbanwere bụ ohere pụrụ iche maka Marriott Bonvoy Ndị otu Elite na ndị ọbịa ọkwa Sheraton Club, na -enyekwa ọnọdụ nnabata na ịdị elu nke na -emegharị nke ọma na mmemme site n'ụtụtụ ruo mgbede. Ndị ọbịa ga -ahụ ihe oriri na ihe ọ beụ updatedụ emelitere, ihe eji enyere ndụ aka, njikọta emebere nke ọma, yana ịnweta 24/7 na gburugburu nkeonwe.
Ndị ọbịa nabatara maka azụmaahịa ma ọ bụ ntụrụndụ
Ndị ọbịa na -enweta ọtụtụ ebe ntụrụndụ na họtel ahụ, gụnyere ọdọ mmiri dị n'èzí na -ele Oké Osimiri Uhie ebe ndị ọbịa nwere ike zuru ike ma rie nri n'ụlọ nri dị n'akụkụ osimiri, Khamsin Pool Bar. Ụsọ osimiri nke ụlọ oriri na ọ hotelụ isụ ahụ bụ ebe na -adịghị mma iji nabata nnọkọ nke onwe, mmanya na -egbu mgbe anyanwụ dara ma nwee ọ enjoyụ n'ihe omume mmiri dị ka kayak na paddleboarding. Ebe ezumike Crystal bụ ebe ndị obodo na -amasịkarị ma na -enye nhọrọ nke ihe ọgesụgesụ, nri dị mfe na ntụrụndụ na mgbede.
Oghere Sheraton Djibouti nwere oghere ihe dị square mita 327, gụnyere ụlọ nzukọ 3 na ụlọ ịgba bọọlụ arụzigharị ọhụrụ nke nwere ike ịnabata ndị ọbịa 180. Nzukọ ndị ọkachamara nke ụlọ oriri na ọ andụ andụ na ndị ọkachamara ihe omume na -enye nka na enyemaka niile dị mkpa maka nnọkọ na -aga nke ọma sitere na nzukọ ndị otu chiri anya ruo emume agbamakwụkwọ buru ibu.
Boumediene Ouadjed, onye isi njikwa na Sheraton Djibouti kwuru, "Obi dị anyị ụtọ ịnabata ndị njem ụwa niile na ndị bi na mpaghara ahụ ka ha nweta oghere ọhụrụ na -akpali akpali na Sheraton Djibouti." . Okirikiri ala ya nke ukwuu gụnyere ọdọ mmiri nnu, ọzara dara na ndagwurugwu nkume, na-eme ka ọ bụrụ ebe dị mma maka ndị hụrụ okike n'anya. ”
Maka ozi ndị ọzọ biko gaa www.sheratondjibouti.com